January 7, 2021 - Achawlaymyar
January 7, 2021 by Achawlaymyar
ဘဝမှာ သူငယ်ချင်းကောင်းတစ်ယောက် ရှိထားရင်တောင် သင်က ကံကောင်းတဲ့သူ ဖြစ်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်း အရင်းကြီးတွေဆိုတာ ဘယ်လောက် အဖိုးတန်လဲဆိုတာကို သူငယ်ချင်းရှိရင် သိမှာပါ။ သူငယ်ချင်း အရင်းကြီး မရှိထားရင် သင်က ဒီအချက်တွေကိုလည်း နားလည်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူငယ်ချင်းအရင်းကြီးတွေမှပဲ ဒီအချက်တွေကို နားလည်တာပါ။ (၁) စကားလုံးတွေထက် ပိုတယ် တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် နားလည်ဖို့ စကားတွေနဲ့ ပြောပြဖို့ မလိုပါဘူး။ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် ကြည့်လိုက်တာနဲ့ ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာကို နားလည်တာက သူငယ်ချင်း ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ပါပဲနော်။ (၂) နေ့တိုင်း ပြောနေဖို့ မလိုဘူး စကားတွေ ပြောမနေလည်း စိမ်းမသွားတာ သူငယ်ချင်းတွေပါပဲ။ စကားပြောပြော မပြောပြော စိတ်ခုစရာ မရှိတာကလည်း သူငယ်ချင်းဆိုတဲ့ သံယောဇဉ်ကြောင့်ပါပဲ။ (၃) တစ်ယောက် ဘဝ … Read more
ည (၁၀) နာရီမှာအိပ်ရာဝင်ရင် သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဘာတွေပြောင်းလဲသွားမလဲ
ညဘက် စောစောအိပ်ရာဝင်ခြင်းရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ စိတ်ကျန်းမာရေးအပေါ် အပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့ သက်ရောက်မှုတွေအများကြီးရှိစေပါတယ်။ ဒီနေ့ဆောင်းပါးမှာတော့ ည (၁၀) နာရီမှာ အိပ်ရာဝင်ရင် သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာ ပြောင်းလဲသွားတဲ့ အရာတွေအကြောင်းပြောပြပေးသွားမှာပါ။ အိပ်ချိန် ပိုရလာမယ် ကျွမ်းကျင်သူတွေက အိပ်စက်ချိန်ကို ကောင်းကောင်းအိပ်မောကျတဲ့အချိန်နဲ့ ကောင်းကောင်းအိပ်မပျော်သေးတဲ့အချိန်ဆိုပြီး နှစ်ပိုင်းခွဲခြားထားပါတယ်။ ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်တဲ့အချိန်နဲ့အကောင်းဆုံးအနားရတဲ့အချိန်က ည (၁၀) နာရီနဲ့ မနက် (၂) နာရီအတွင်းမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကတော့ ကောင်းကောင်းအနားရချင်ရင် စောစောအိပ်ရာဝင်ရမယ်ဆိုတာပါပဲ။ ပိုပြီးသန်မာလာမယ် လူတွေအိပ်နေချိန်မှာ ခန္ဓာကိုယ်က ကြီးထွားဟော်မုန်းတွေထုတ်ပေးတာ ဟော်မုန်းတွေ ပြုပြင်ပေးတာ စသဖြင့် သူ့ဘာသာသူ ကုသပေးလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီလုပ်ဆောင်ချက်တွေက နောက်နေ့အတွက် အသင့်ဖြစ်နေဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အားကစားသမားတွေအတွက် အိပ်ချိန်ပြည့်ဝနေဖို့ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှု လျော့ကျလာမယ် အိပ်ချိန်ပြည့်ဝစွာမရရှိခြင်းက Cortisol ဟော်မုန်းပမာဏကို တိုးပွားလာစေပြီး … Read more
ခြေမထက် ခြေညှိုး ရှည်တဲ့ သူတွေကို ဘာ့ကြောင့် လက်မလွှတ်သင့်တာလဲ ?..
ခြေညှိုးဟာ ခြေမထက် ရှည်တဲ့ သူတွေတော်တော် များများရှိ ပါလိမ့် မယ်။ အဲလို လူတွေရဲ့ ဖြစ်တတ် တဲ့စိတ် သဘော ထားတွေ ကို တင်ပြပေး လိုက်ပါ တယ် ။ သူတို့မှာ ကောင်းတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိနေပါတယ်။ယောကျားလေး ပဲဖြစ်ဖြစ်၊မိန်းကလေး ပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့လို လူတွေကိုတွေ့ရင်တော့ ခြေမထက် ခြေညှိုး ရှည်တဲ့ သူတွေကို ဘာ့ကြောင့် လက်မလွှတ်သင့်တာလဲ ?.. လက်မလွတ် လိုက် ပါနဲ့သူတို့ဟာ ချစ်ပြီ ဆိုလဲ သူများ နဲ့မတူ သလို မုန်းပြီ ဆိုလဲ လှည့်ကြည့် တတ်သူတွေ မဟုတ် ပါဘူးခြေညှိုးက ခြေမထက် ရှည်နေ တဲ့ သူဟာ ၁။ အချစ်ကြီး တယ် အစွဲအ လမ်းကြီး ခံစားလွယ် … Read more
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ တန်ဖိုးဟာ သူများက သတ်မှတ်ပေးရတာ မဟုတ်ပါဘူး၊ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် သတ်မှတ်တာမျိုးပါ။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားနဲ့ သူ့ကို တန်ဖိုးထားခြင်းတွေက သူ့ရဲ့တန်ဖိုးကို ဖော်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ် အခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ မိန်းကလေးတွေဟာ အချစ်ရေးနဲ့ ပတ်သက်ရင် ဘယ်လိုပြုမူတတ်သလဲ၊ ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချတတ်သလဲ ပြီးတော့ ဘယ်လိုစိတ်ဓာတ်ရှိသလဲ ဆိုတာပါပဲ။ တကယ်လို့ သင်ဟာ ဒီအချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီနေခဲ့ရင် တန်ဖိုးရှိတဲ့ မိန်းကလေးတစ်ယောက်အဖြစ် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဂုဏ်ယူလိုက်ပါနော် …။ (၁) မချစ်သင့်တဲ့သူကို မချစ်ဘူး။ ဒီလို မိန်းကလေးတွေ အနေနဲ့ မချစ်သင့်တဲ့သူတွေကို ဘယ်တော့မှ ချစ်မိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အကြောင်းကတော့ သူတို့ဟာ ကိုယ်ကျင့်တရားဖောက်ပြန်တာ၊ လူမှုရေး ဖောက်ပြန်တာမျိုးတွေကို အရမ်းမုန်းပြီး အဲလိုမဖြစ်အောင်လည်း အရမ်းဂရုစိုက်ကြပါတယ်။ မချစ်သင့်တဲ့ သူမျိုးကိုဆို အစကတည်းက မပတ်သက်မိအောင် နေတတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လည်းသူတို့ဟာ … Read more
လူငယ်စုံတွဲ ဟိုတယ် အခန်းထဲက တစ်ပတ်လုံး အပြင်မထွက်လို့ ဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ…
လူငယ်စုံတွဲ ဟိုတယ် အခန်းထဲက တစ်ပတ်လုံး အပြင်မထွက်လို့ ဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ အဆင့်မြင့် ဟိုတယ်တစ်လုံး မှာ စုံတွဲတစ်တွဲ အခန်းငှားတည်းခိုခဲ့ပြီး ၇ ရက် တစ်ပတ်လုံးလုံး အခန်းထဲကထွက်လာတာမတွေ့ရတဲ့အတွ က် ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းများနဲ့ ဟိုတယ်ပိုင်ရှင်ကပါ မသင်္ကာဖြစ်လာပြီးအခန်းကို ဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ၊အားလုံး အံ့အားသင့် ဒေါသထွက်ခဲ့ကြရပါတယ်။ ဟိုတယ်ပိုင်ရှင် ကိုယ်တိုင် ပစ္စည်း ပို့သမားယောင်ဆောင်ကာ အခန်းတံခါးကို သွားခေါက်ခဲ့ပါတယ်။အခန်းတံခါးဟရုံလေးဖွင့်လာပါတယ်။တံခါးဟနေတဲ့ ကြားကနေအခန်းထဲကို လှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ထိတ်လန့်အံ့အားသင့်စရာ မြင်ကွင်းကို မြင်လိုက်ရပါတယ်။ ဟိုတယ်အခန်း နေရာအနှံ့မှာ စားကြွင်း စားကျန်များ အမှိုက်များ ပြန့်ကျဲပြီး စည်းကမ်းမဲ့ ပစ်ထားတာကြောင့်အနံ့တွေကမကောင်းတော့သလို အခန်းထဲက အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းအချို့လည်း ဖျက်ဆီးခံထားရတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဟိုတယ်ပိုင်ရှင်က ချက်ခြင်း ရဲစခန်းကို ဖုန်ဆက် တိုင်ကြားခဲ့ပါတယ်။အခန်းတွင်း ပျက်ဆီးမှုတန်ဖိုးဟာ ဒေါ်လာ ၄၀၀၀ ခန့်ရှိမည်ဖြစ်ပြီးသူ့တို့တည်းခိုတဲ့ အခန်းခနဲ့တောင် မကျေနိုင်ပါဘူး။ … Read more
ကိုယျဝနျကွီးနဲ့မို့ မလုပျပါနဲ့ပွောတာကို တားမရ၍ မခံနိုငျတဲ့အဆုံး ရပျကှကျရုံး တိုငျကွားခဲ့ရတဲ့အဖွဈ…
ကိုယ်ဝန်ကြီးနဲ့မို့ မလုပ်ပါနဲ့ပြောတာကို တားမရ၍ မခံနိုင်တဲ့အဆုံး ရပ်ကွက်ရုံး တိုင်ကြားခဲ့ရတဲ့ အဖြစ် “မရဘူး….ရှင့်ကို ရာအိမ်မှူးနဲ့ကို တိုင်မှာ” “မိန်းမကလည်းကွာ… ငါက ချစ်လို့စတာကို လာပါ ပြန်ရအောင် “မပြန်ဘူး မပြန်ဘူး… ရှင့်ကို တိုင်ကိုတိုင်မှာ အဲဒါမှ ရှင် နောက်မလုပ်ရဲမှာ” ရုံးရှေ့က ဆူဆူညံညံ အသံတွေကြောင့် ဘာဖြစ်တာလဲဆိုပြီး ထွက်ကြည့်မိတော့ မျိုးချစ်နဲ့ သူ့မိန်းမ ပေါက်ကြီး ပေါက်ကြီးဆိုတာက တစ်နှစ်တစ်ယောက် မှန်မှန်မွေးနေကျမို့ ပေါက်ကြီးလို့ခေါ်တာ။ အမြဲတမ်း လင်မယားတကျက်ကျက်နဲ့ ရန်ဖြစ်နေတာတောင် ပေါက်ကြီးတို့လင်မယားက တစ်နှစ်တစ်သားတော့ပုံမှန်ပေါက်နေကျ အခုလည်း ကလေးတစ်ယောက်က လက်မှာ တွဲလောင်းဆွဲလို့ ဗိုက်ထဲမှာက တစ်ယောက်နဲ့…အဲဒါလည်း ခုထိ အဖြေထုတ်လို့ မရသေးတဲ့ ပုစ္ဆာ “ရာအိမ်မှူးရေ… ရာအိမ်မှူးတပည့်နဲ့ကျွန်မကို ကွာရှင်းပေးပါ” “ဘာဖြစ်လာပြန်ပြီလဲဟာ နင်တို့လင်မယားကလည်း အမြဲတမ်းရန်ဖြစ်မယ်လို့များ … Read more
အမျိုးသမီးတွေကုို ဆွဲဆောင်ရာမှာ ရုပ်ရည်ထက် ပုိုပြီးအရေးကြီး အရာ ( ၃ ) ခု..
ခြေချောင်းလေးတွေ တစ်ခုချင်းဆီက ပြောတဲ့ စာဖတ်သူတို့ရဲ့ စိတ်နေသဘောထားလေးတွေကို နည်းနည်းလေး မျှဝေပေးချင်ပါတယ် ၁။ ခြေမ ခြေမက တခြားခြေချောင်းတွေထက် ပိုရှည်နေရင် သင်တာ တော်တယ်၊ ဥာဏ်ကောင်းတယ်၊ တီထွင်းမှုစွမ်းရည်ကောင်းတယ်။ဒါ့ကြောင့် ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်တယ်။ တစ်ခုခုဆို အာရုံစိုက်နေဖို့ ခက်ခဲပေမယ့် သင့်လုပ်ရမယ့်အရာ မပြီးမချင်း သင်မနားတမ်းလုပ်လေ့ရှိတတ်တယ်။ခြေမက တခြားခြေချောင်းတွေထက် ပိုသေးနေရင်တော့ သင်ဟာ စွယ်စုံရတဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စာအုပ်ကြီးအတိုင်းပဲ လုပ်တတ်တဲ့သူပါ ၂။ ခြေညိုး သင့်ရဲ့ ခြေညိုးလေးက တခြားခြေချောင်းလေးတွေထက် ပိုရှည်နေရင် သင်ဟာ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ရဲ့ ရည်အချင်းရှိတယ်။လူတွေကို စီမံခန့်ခွဲ အုပ်ချုပ်ရာမှာ တော်တယ်။ လုံ့လရှိတယ်။ ၀ိရိယရှိတယ်။ သင်ယုံကြည်တဲ့အရာအပေါ် မားမားမတ်မတ် ရပ်တည်တယ်။ သင့်ရဲ့ ခြေချောင်းက တခြားခြေချောင်းလေးတွေထက် ပိုတိုနေရင်တော့ သင်ဟာ သင့်ကိုယ်တင် … Read more
မျက်နှာသစ်တဲ့အခါ ကုသိုလ်(၅)မျိုးကို ရအောင်ယူနည်း (၁) “ဒါနကုသိုလ်” မနက်အိပ်ယာထမျက်နှာသစ်တော့မယ်ဆိုရင် ရေဖလားထဲကို ရေထည့်လိုက်ပါ မျက်စိနဲ့မြင်သာမယ့် ရင်ခေါင်းလောက်မှာ ရေဖလားကို ကိုင်ထားပါ။ ရေဖလားကို အပေါ်တော့ မမြှောက်လိုက်ပါနဲ့။ မေတ္တာပို့တဲ့အခါ အ ဆင်မပြေမှာစိုးလို့ပါ။ လက်ကကိုင်ထားတဲ့ရေဖလားနဲ့ ” မြတ်စွာဘုရား မျက်နှာသစ်တော်ရေ ကပ်လှူပါ၏ဘုရား။ ဘုရားတပည့်တော်ကို သနားချီးမြှောက်သောအားဖြင့် မျက်နှာသစ်တော်မူပါဘုရား” လို့ဆိုပြီး ကပ်လိုက်ပါ။ ဒါဆို ဒါနကုသိုလ်ဖြစ်သွားပါပြီ။ (၂) “ဗုဒ္ဓနုသာတိကုသိုလ်” မြတ်စွာဘုရားမျက်နှာသစ်တော်ရေ အသုံးပြုနေတုန်းမှာ အရဟံကို အနက်(၃)ခုနဲ့ ပွါးလိုက်ပါ။ အရဟံ – ကိလေသာ မြူမှုန်ပင် ကင်းစင်တော်မူသော မြတ်စွာဘုရား၊ အရဟံ – ပူဇော်အထူးကို အထူးခံယူတော်မူထိုက်သော မြတ်စွာဘုရား၊ အရဟံ – ဆိတ်ကွယ်ရာအရပ်မှာပင် မကောင်းမှုကို မပြုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရား။ ဒါဆို ဗုဒ္ဓနုသာတိကုသိုလ်ဖြစ်သွားပါပြီ။ … Read more